Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Hair Loss in Women Treatments ဆံပင်ကျွတ်တာ ဘာနဲ့ကုမလဲ
အမျိုးသမီး ဆံပင်ကျွတ်တာကို ယောက်ျား-ဟော်မုန်းဆေးနဲ့ ကုရတယ်လို့ပြောရင် ကသိကအောင့်တော့နိုင်ပါမယ်။ ရောဂါနာမည်ကိုက Androgenetic alopecia (အင်ဒရိုဂျင်းနစ်) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းလို့ ခေါ်တာဟာ ယောက်ျား-ဟော်မုန်းနာမည် ဖြစ်နေတာ သတိပြုပါ။
1. Minoxidil (Rogaine) ဆေးဟာ အရင်က သွေးတိုးအတွက်ပေးတဲ့ စားဆေးဖြစ်တယ်။ ဆေးသောက် နေသူတွေမှာ ဆံပင်တွေ ထူထဲလာရာကနေ သိလာတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးပါဘဲ။ သုတေသနလုပ်တော့ လိမ်းဆေးပေါ်လာတယ်။ လိမ်းဆေးက သွေးထဲဝင်ပေမဲ့ မများပါ။ ဆေးက မျက်နှာလိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုသိသိသာသာ ကောင်းတာတွေ့ရတယ်။ Minoxidil 2% ကိုသာ FDA က အသိအမှတ်ပြုထားတယ်။ 5% ရောင်းတာရှိပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မသုံးသင့်ပါ။ ဆရာဝန်ကနေညွှန်ရင်လဲ သူ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်ကနေ လုပ်စေပါတယ်။ 5% ထိရောက်မှု ပိုတာတော့ တွေ့ရတယ်။ ၈ လ ဆေးလိမ်းတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၄၅ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးတွေကို လေ့လာတော့ ၁၉% မှာ အသင့်အတင့် ကောင်းတယ်။ ၄ဝ% မှာ အနည်းအကျဉ်း ကောင်းတယ်။ ဆေးမပေးအုပ်စုမှာ ၇% နဲ့ ၃၃% လို့ နှိုင်းယှဉ်နိုင်တယ်။
5. Estrogen (အီစထိုဂျင်) နဲ့ Progesterone (ပရိုဂျက်စတီရုံး) ဟော်မုန်းတွေပါတဲ့ Oral Contraceptives ကိုယ်ဝန်တား စားဆေးတွေကနေ မျိုးဥအိမ်ကနေထုတ်တဲ့ Ovarian androgens ဟော်မုန်းတွေကို နည်းစေတယ်။ ဒါကြောင့် Androgenetic alopecia (အင်ဒရိုဂျင်) များလို့ဖြစ်ရတဲ့ ဆံပင်နည်းတာ-ပါးတာအတွက် သုံးနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ရာသုံးတဲ့အခါ သတိထားစရာတွေ မသုံးသင့်တာတွေအတိုင်း သတိရှိရမယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 11:04 AM